कस्तो छ तपाईको मंगलबारको भाग्य? साउन १२ गतेको राशिफल हेर्नुहोस् - dautarimedia.com
कस्तो छ तपाईको मंगलबारको भाग्य? साउन १२ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
sanjay July 27, 2021 1 min read
कर्कट स् आय आम्दानिका बिभिन्न श्रोतहरु फेला पर्नेछन् । मानसीक त ना बका कारणले गर्दा कार्य क्षेत्रमा झन्झट आई पर्न सक्नेछ । पारीवारिक भेटघाटको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला । शारीरिक आलस्यताका कारण गरीरहेको कार्यमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य खराबी उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
Previous: मेरि बास्सै छोडेका बान्द्रेले यो पेशाबाट महिनाको पाँच लाख कमा उछन्-हेर्नुहोस
Next: पाँच प्रदेशमा बिहीबारसम्म ‘भारी वर्षा’ को सम्भावना, सतर्क रहन आह्वान